Paiso | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana no maha-ilaina ny pery ho an'ny vatana?
Peach dia tsy mamoa voa tsara, izay, noho ny hatsarany sy ny sakaizany, dia mihoatra ny ankamaroan'ny voankazo voamarina, manana zavatra mahasoa maro izany, izay mahatonga azy ho mpitarika amin'ny safidin'ny mpanjifa. Ny tombontsoa azo avy amin'io voankazo io dia hita ao amin'ny cosmetology, ary azo ampiasaina am-pahazotoana amin'ny fanomanana mask, scrubs ary fitaovana tsara tarehy hafa.
Poti-maina: fananana mahasoa, fomba fandosoana sy famokarana ao an-trano
Isaky ny indray mandeha fara-fahakeliny teo amin'ny fiainako no nanandramako abiko voatoto - kitrotro maroto, saingy tsy dia maro no nahare peona maina, izay tsy vitan'ny sakafo matsiro ihany fa mahasoa ihany koa. Ankehitriny ianao dia hianatra ireo paiso maina, inona ny tombontsoa sy ny fahasimbana amin'ireo voankazo ireo. Hilaza ihany koa momba ny fikarakarana sy ny fitehirizana ny fahandroana.
Fig peach: ny soa sy ny loza
Ny zavatra mahaliana indrindra amin'ny peach figia dia tsy misy ifandraisany amin'ny aviavy. Ny endriny matevina kosa dia mitovy amin'ny aviavy maina, toy ny aviavy antsoina ihany koa, saingy tsy misy miantso an'io aviavy io. Any amin'ny faritra hafa any Andrefana, izy dia antsoina hoe donut ho an'ny endrika nofonosina.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Paiso